Alemaina: Fitoriana ampahibemaso eo akaikin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana
Mitory amin’ny mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina
Lasa nitombo be ny fiteny itoriana ny vaovao tsara any Alemaina satria be dia be ny mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina. Vao haingana izay, dia nisy antoko-mpitory sy antoko-mpitory santatra 229 niforona tao anatin’ny sivy volana. Kilasy 30 fianarana teny vahiny no natsangana ary 800 teo ho eo ny mpitory nanatrika an’izany mba hianatra fiteny 13.
Mitory amin’ny mpiavy any amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana ny mpiara-manompo amintsika any. Manao fampirantiana any amin’ny toerana 200 mahery izy ireo ka boky 640 000 teo ho eo no voazaran’izy ireo.
Nanaiky ny Filan-kevi-pitantanana hoe hasiana fitoriana manokana any, ny volana Mey ka hatramin’ny Jolay 2016. Mpitory 700 eo ho eo miteny arabo, avy any amin’ny firenena fito, no nankany amin’ny toerana folo any Aotrisy sy Alemaina, mba hitory amin’ireo olona be dia be miteny arabo mipetraka any.
Vola madinika eny an-dalana
Misy mpitory 50 ao amin’ny Fiangonana Faber’s Road Kriol, any Belize, ary matetika izy ireo no mandeha an-tongotra rehefa manompo. Tsy dia manam-bola ny ankamaroan’ireo rahalahy nefa malala-tanana foana izy ireo. Taona vitsivitsy lasa izay, dia nanomboka naka vola madinika hitany eny amin’ny lalana mamovoka izy ireo rehefa mitory isan-trano. Manokana fotoana isaky ny faran’ny taona izy ireo, nanomboka tamin’izay, mba hanasa sy hanisa ny vola madinika azony.
Kely vidy ny ankamaroan’ireo vola madinika [Ar 10 eo ho eo], nefa mahangona 700 000 ariary mahery isan-taona izy ireo. Ampiasain’izy ireo handoavana ny fikojakojana ny Efitrano Fanjakana ny antsasany, ary omeny ho an’ny asa maneran-tany ny antsasany.
Mpihaino efatra tapitrisa!
Anisan’ny miavaka indrindra amin’ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah any Burundi izay nitranga tamin’ny fitsidihan’i Anthony Griffin, solontenan’ny foibe, tamin’ny 5 Martsa 2016. Nalefa tamin’ny radiom-pirenena ny fandaharana manontolo ho an’ny fiangonana, ary efatra tapitrisa teo ho eo angamba ny mpihaino.
Fitoriana tamin’ny mpihaino tokoa ilay fandaharana! Betsaka no nanao fanamarihana tsara. Hoy ny teknisianina iray tao amin’ilay radio: “Tokony hanao maromaro hoatran’ireny ianareo!” Hoy koa ny mpiasan’ny radio iray: “Mampirisika anareo [handefa fandaharana hoatr’ireny] foana aho, satria mamonjy fanahin’olona maro ireny.” Betsaka ny bisy sy taxi nandefa an’ilay radio.
Nijanona ilay rindran-kira
Nanahy ny rahalahy ao amin’ny antoko-mpitory mitokana any Népal, iray andro talohan’ny Fahatsiarovana 2016, satria hisy rindran-kira lehibe ao amin’ilay sekoly eo akaikin’ny trano nohofan’izy ireo.
Mitabataba be ny rindran-kira hoatran’io. Hoy ny mpikarakara an’ilay rindran-kira tamin’ireo rahalahy nanadio an’ilay toerana, ny marainan’ny Fahatsiarovana: “Tsy haheno na inona na inona afa-tsy ny mozikanay ianareo androany.”
Nanomboka tamin’ny 12 ora ilay fampisehoana ary tena nitabataba tokoa. Nanofa fanamafisam-peo matanjaka lavitra noho ilay saika nampiasainy ireo rahalahy, nefa tsy heno na dia ny andrana natao tamin’ny mikrô aza. Kivy izy ireo ka nivavaka mafy tamin’i Jehovah. Antsasak’adiny talohan’ny Fahatsiarovana, rehefa nanomboka tonga ny mpanatrika, dia nijanona tampoka ilay mozika nitabataba. Hay niady ireo olona nisotrosotro tao amin’ilay rindran-kira, ka tsy maintsy najanon’ny polisy ilay fampisehoana! Nangina sy nilamina tsara àry ilay toerana rehefa nanomboka ny Fahatsiarovana ka mendri-kaja tsara ilay fotoana.
Mahazo teny fiderana ny jw.org
Mpisava lalana maharitra any Italia i Giuseppe. Miasa ho an’ny orinasa iray mpanoro hevitra momba ny Internet izy. Nanatrika fivoriana niaraka tamin’ny mpiara-miasa aminy 70 teo ho eo izy, tamin’ny volana Mey. Nodinihin’izy ireo izay hevitra vaovao azon’ny orinasany ampiharina. Nilaza ny iray amin’ny lehibeny hoe misy tranonkala sasany azo alaina tahaka. Nampiseho ohatra teo amin’ny efijery izy avy eo. Taitra i Giuseppe satria ny pejy fandraisana amin’ny jw.org no nasehony. Hoy ilay lehibe: “Io no tranonkala tsara indrindra eran’izao tontolo izao!” Nandinika ny lafiny teknika amin’ny jw.org izy avy eo. Nolazainy hoe manintona ny paozin’ilay tranonkala ary mora hita ny rohy (liens).
Hoy i Giuseppe: “Gaga ny mpiara-miasa amiko hoe mahazaka fiteny be dia be ilay tranonkala. Rehefa vita ilay fanazavana dia hoy ny mpiandraikitra anay tamin’ny mpanatrika sy ilay lehibe: ‘Vavolombelon’i Jehovah ange i Giuseppe e!’ Hoy ilay lehibe tamiko: ‘Mendri-piderana ny fikambananareo. Nahavita tranonkala tena tsara ianareo, dia mitsiriritra an’io daholo ny orinasa sy fikambanana eran-tany. Azoko an-tsaina ny asa be tafiditra amin’ilay izy mba hanaraka ny toetrandro foana ilay tranonkala ary ho mora ampiasaina. Tsy maintsy mitandrina be amin’ny pitsipitsiny madinika sy ny zavatra havoaka ao koa ny mpikirakira azy.’ Tsapako hoe tsy mendrika an’ilay fiderana aho. Maro tamin’ny mpanatrika teo anefa no tsy nahalala momba ny Vavolombelon’i Jehovah, dia faly aho hoe fitoriana amin-dry zareo ilay izy. Miresaka tsy tapaka amin’ny mpiara-miasa amiko sasany momba ny Baiboly aho izao, ary efa mianatra mihitsy aza ny telo.” Mbola “mianatra” avy amin’ny jw.org foana ny orinasa iasan’i Giuseppe, fa izy kosa manohy midinika ny Baiboly amin’ny mpiara-miasa aminy.
Tsy nilalao baolina any andafy indray izy
Arzantina: Milalao baolina miaraka amin’ireo rahalahy i Jorge
Ankizilahy mipetraka any Arzantina i Jorge. Tamin’ny 2010 izy no nahalala ny vaovao tsara, rehefa nisy mpiara-mianatra aminy nitory taminy. Nianatra Baiboly tamin’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? àry izy. Nilalao baolina kitra izy tamin’izany. Nahay be izy ka tafiditra tao amin’ny ekipa iray. Nasaina hilalao tao amin’ny ekipa iray any Alemaina izy, tamin’ny Aprily 2014. Faly be izy hoe ho lasa mpilalao matihanina ka nanaiky handeha. Andro vitsivitsy talohan’ny fotoana tokony handehanany anefa dia niteny taminy ny mpanazatra azy hoe: “Vavolombelon’i Jehovah moa ialahy? Aza simbana any andafy any ny fiainan’ialahy. Vavolombelon’i Jehovah koa aho tamin’ny mbola kely. Nasaina hilalao tao amin’ny ekipa iray tany Azia aho. Nampanantena zavatra be dia be ry zareo dia sodokan’izay aho. Nankany izahay mianakavy nefa diso fanantenana be dia nody avy eo.” Hoy i Jorge: “Nampieritreritra be ahy ny teniny dia nanapa-kevitra aho hoe tsy ho any Eoropa. Lasa mpitory aho tamin’ny 2015 dia avy eo natao batisa.”
Tena fitahiana maimaim-poana
Natao tany Kampala, Ogandà, ny fivoriamben’ny vondrom-paritra “Tahafo i Jesosy”, tamin’ny Septambra 2015. Faly be ny mpanatrika rehefa navoakan’i Mark Sanderson, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny luganda.
Hoy ny mpianatra Baiboly iray: “Faly be aho rehefa nahazo an’iny Baiboly tsara tarehy iny. Niomana handray ny papa ny olona tamin’iny. Nisy sapile misy ‘fitahiana’ namidy 30 dolara àry mba hanangonam-bola. Te hahazo fitahiana ny olona nefa betsaka no tsy nanam-bola. Izaho anefa nahazo ny tena fitahiana maimaim-poana. Nomen’i Jehovah an’izay nanatrika fivoriambe ilay izy dia ny tsirairay no manao fanomezana an-tsitrapo. Hovakiko isan’andro amin’ny fitenin-drazako izao ny Teniny, dia hahalala azy tsikelikely aho. Ho tsapako amin’izay hoe tena tahiny aho. Misaotra an’i Jehovah aho fa nomeny Baiboly.”
Atao pirinty any amin’ny faritra tsy hita maso, hono
Tsy tian’ny mpitondra fivavahana sasany any Congo (Kinshasa) hijery ny www.jw.org ny mpivavaka ao aminy, ka nilazany izy ireo hoe any amin’ny faritra tsy hita maso no atao pirinty ny bokin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Lazainy fa manondro ny 666 ao amin’ny Apokalypsy, hono, ilay hoe “www.” (Apok. 13:18) Tsy nety nianatra Baiboly intsony àry ny olona sasany.
Nivavaka momba an’izany ny mpivady mpisava lalana iray ary nasainy tany an-tranony ny olona ampianariny Baiboly sy ny vadin’izy ireo. Mpivady telo no tonga. Taorian’ny sakafo, dia nalefan’izy mivady ilay video hoe Vavolombelon’i Jehovah—Voalamina mba Hitory ny Vaovao Tsara. Hitan’ireo vahiny hoe diso tanteraka ny zavatra henony momba ny bokintsika. Herinandro taorian’izay, dia nanao fanomezana 100 dolara [Ar 360 000 eo ho eo] ny vadin’ny iray tamin’ireo mpianatra. Mbola tsy nianatra Baiboly ilay rangahy nefa tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nandray an’ilay vola ilay mpivady mpisava lalana mba hatao fanomezana ho an’ny asa maneran-tany.
Mianatra ny hira vaovao
Tsy misy Internet any amin’ny toerana mitokana any Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tena te hianatra ny hirantsika vaovao anefa ny mpiara-manompo any. Mandefa rahalahy iray any amin’ny tanàna akaiky indrindra àry ny Fiangonana Mundip. Dia an-tongotra adiny roa miampy adiny roa mandeha bisy ny lalana. Adikany amin’ny kahie ny tononkira hitany ao amin’ny Internet rehefa tonga any izy, ary miverina mody izy avy eo. Soratany eo amin’ny tabilao ao amin’ny Efitrano Fanjakana ny tonon’ireo hira vaovao, ary iny no adikan’ny rehetra mba hampiasaina rehefa mivory. Tena te hihira ho an’i Jehovah miaraka amin’ny vahoakany eran-tany izy ireo.